Dubai International Zvemari Center | Mutemo Makambani Dubai
Dubai International Zvemari Center
Magweta edu anosarudzika muDubai International Financial Center (DIFC) uye uve neboka rakazvitsaurira iro rinokupa iwe mazano pane zvese zvine chekuita neDIFC, kusanganisira kuiswa-kushanda uye kushanda kwemari, masangano emari uye makambani ari pakati. Isu zvakare tinopa zano pamusoro pekupihwa mvumo yezviitiko, kubvumidza kubvumidzwa kubva kune Dubai Financial Service Chiremera (DFSA), kushanda uye kutora chikamu paNASDAQ Dubai uye zvese zvinoteera zvekutevera. Chikwata chedu chakamiririra vatengi maererano nekuferefetwa neDFSA uye vakayambira maererano nekumanikidza kwekutora kwavakaita.
Dubai International Financial Center yakagadzirirwa kuve nzvimbo yemahara yemari inopa yakasarudzika, yakazvimirira yezvemitemo uye inotungamira maitiro kuitira kuti vagokwanisa kugadzira nharaunda yekukura, kufambira mberi uye kusimudzirwa kwehupfumi mumatunhu ese eArab Emirates nedunhu rakakura. Iyo DIFC Courts ine kutonga pamusoro pezvakawanda zvehurumende uye zvekutengeserana zvinhu zviri kuitika mukati meDIFC, pamwe nekutonga kwavo kwenyika.
Chikwata chedu chinotungamira munda kupa zano mapato panguva yekuferefeta kweDFSA uye pazvinenge zvakakodzera, kutaurirana pekugara pachinzvimbo chavo. Maitiro edu akarairwa nekambani yekutanga yakabvumidzwa kubhadhariswa mari neDFSA uye kubva zvino kuenderera mberi nekuraira maererano neruzhinji rwezvose kuferefetwa kweDFSA zvichikonzera kuburitswa neruzhinji.
Nomutsa batana nesu DIFC Nyaya